Wadooyinka - Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale
Waagu cusub ayaa ubaxaa sidaan xor u nahay,
waayo had iyo jeer iftiin baa jira haddaynu geesi nahay oo aan aragno,
haddii kaliya aan nahay geesinimo ku filan inaan noqonno.
- Abwaanad Amanda Gorman
Baadh Wadooyinka Wax Barashada
Dugsiyada Robbinsdale Area, himiladeenu waa dhiirigelinta iyo waxbarida dhammaan ardayda si ay u horumariyaan awooddooda gaarka ah. Waa geedi socod soconaya sanado badan, laga soo bilaabo carruurnimada hore ilaa dugsiga sare iyo wixii ka dambeeya. Arday walbaa wuxuu u gaar yahay sida rajada iyo riyada qoysaskoodu u qabaan iyaga. Degmadeena, kobcinta koritaanka carruurta oo si togan wax ugu tari doona bulshadooda waa iskaashi u dhexeeya qoysaska iyo dugsiyadeena.
Labada Luuqadood /
Akadamiyadda Robbinsdale - Dulmarka sare
Robbinsdale Isbaanishka Isbaanishka
Carruurnimada Hore & Xanaanada
Dugsiyada Aagga Robbinsdale waxay bixiyaan fursado aan caadi ahayn oo kobciya ardayda si fiican u dhisan oo dhisa dareenka bulshada oo xoog badan. Wadooyinkeenna Bulshada ee Iskuulku waxay isu keenaan deriska, waxayna kobciyaan saaxiibtinimo socon karta inta uu nool yahay oo dhan.
Barnaamijka Meelaynta Horukacsan (AP) ee Dugsiyada Robbinsdale Area waa barnaamij iskaa wax u qabso ah oo ay ardaydu ku qaataan koorsooyin heer kuliyadeed ah intay weli ku jiraan dugsiga sare. Ardaydu waxay dooran karaan koorsooyin 22 maaddo ah, oo ay ku jiraan farshaxanka, sayniska kombiyuutarka, joqraafiga, dowladda, aragtida muusikada iyo waxyaabo kale oo badan.
Barnaamijka Robbinsdale International Baccalaureate (IB), ardayda waxay u sahamiyaan adduunka inay yihiin bulsho isku xiran. Iyagoo qaadanaya aragti caalami ah, waxay horumariyaan xirfadaha su'aalaha ku saleysan su'aalaha, iyagoo ka fakaraya kana milicsanaya indha indheynta ay sameeyeen.
Robbinsdale waxay bixisaa fursado badan oo lagu sahaminayo luqadaha. Marka ay bartaan wax ka badan hal luqadood, ardaydu waxay kordhiyaan isku xirnaanta maskaxda iyo dabacsanaanta xagga fikirka. Aqoonyahanadu sidoo kale waxay balaariyaan eraybixintooda, waxayna ku kasbadaan dhaqamada kala duwan.
Loogu talagalay hal abuurka, gacmaha-ardayda, dariiqa farshaxanka ayaa u noqon kara mid ku habboon. Ardayda ku dhex milmay barnaamijka farshaxanka wanaagsan ee isku dhafan waxay horumariyaan xirfado hal abuur leh oo ay ku dabaqi karaan dhammaan maaddooyinka oo dhan.
Mustaqbalku wuxuu ka bilaabmayaa xilligan xaadirka ah Dugsiyada Aagga Robbinsdale. Ardayda ka qayb qaadata sayniska, teknolojiyadda, injineernimada, farshaxanka iyo xisaabta (STEAM) barnaamijyada waxay horumariyaan fikirka adag ee xasaasiga ah iyo xirfadaha xalinta dhibaatooyinka.
Ardayda qaarkood waxay doorbidaan barashada farsamada maxaa yeelay kuma xirna jadwalka dawanka dugsiga. Meel kasta ayey ka baran karaan waqti kasta. Akadeemiyada Virtual Robbinsdale waxaa loogu talagalay ardayda ku jirta Fasalada 6 ilaa 12 iyadoo leh darajooyin badan oo dhow dhowaan.